Fantaro ilay bilaogera Sara Abd Al-Maktari · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Septambra 2018 15:58 GMT
(Marihina fa tamin'ny 12 Desambra 2010 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Matetika ny mpandray anjara amin'ny atrikasa famahanana bilaogy no mahatsapa fa ilaina ny manaparitaka ny zavatra nianarany ho an'ny hafa. Hita tao Yemen ihany koa ny faniriana toy izany tao amin'ny tetikasa ‘Fanohanana ireo Vehivavy Mpikatroka amin'ny Teknikan'ny Media’ (EWMAT) izay tohanan'ny Rising Voices . Nanapa-kevitra ny handray anjara mavitrika kokoa tamin'ny tetikasa ny iray tamin'ireo mpandray anjara noho ny zavatra niainany voalohany tamin'ny fianarana momba ny media vaovao. Avy any an-tanàndehiben'i Ta'izz i Sara Abd Al-Maktari, 21 taona ary mpianatra teny Anglisy sy Informatika ao amin'ny Oniversiten'i Sanaa, izay nandray anjara tamin'ny atrikasa voalohany momba ny famahanana bilaogy nomen'ny EWMAT. Fotoana fohy taorian'izay dia nanolotra ny fanampiany izy tamin'ny fampiofanana ireo zatovovavy maro kokoa.
Sarin'i Sara nitarika ny iray tamin'ireo atrikasa tao Sanaa
Nandresy lahatra azy ny fahaizana azony avy amin'ireo fotoam-pivoriana ireo fa tokony hianatra bebe kokoa momba ny fandraisana anjara amin'ny fitaovana fampahalalam-baovao ny zatovovavy maro kokoa izy. Noho izany dia nilatsaka an-tsitrapo izy nitarika atrikasa vitsivitsy tamin'ny fiandohan'ny volana Oktobra 2010 ka nahasarika vehivavy tanora miisa 12 nianatra momba ny media vaovao. Nanampy azy ny traikefany tamin'ny naha mpiofana azy rehefa tonga ny fotoana amin'ny maha mpampiofana azy. Tamin'ny antsafa nifanaovany tamin'ny Rising Voices dia hoy i Sara:
Mahazo fahaizana maro aho rehefa mampiofana. Ny fomba hiatrehana ireo mpiofana sy ny fomba hananana faharetana ny iray tamin'izany satria tena tsy mora izany. Nanome ahy fahatokisan-tena bebe kokoa izany satria tsy haiko hadinoina ny fahaizana nomena ireo mpandray anjara. Misy fahasamihafana goavana eo amin'ny maha-mpandray anjara sy ny maha-mpampiofana ao amin'ny EWAMT. Fony aho mpandray anjara dia nitady vaovao fotsiny fa tena andraikitra goavana izany tamin'ny maha mpampiofana ahy … nianatra ny ho manam-paharetana aho.
Nankasitraka an'i Sara tamin'ny fahaizany mitarika atrikasa ny mpanorina ny EWAMT, Ghaida'a Al-Absi, ary manantena izy fa ho tsara ny hoaviny:
Iray tmin'ireo tantaran'ny fahombiazana ao amin'ny tetikasa EWAMT i Sara. Raha tsy nisy ny EWAMT dia tsy ho mpampiofana amin'ny media vaovao izy, ary ankizivavy maro hafa no tsy nanana fahalalana momba ny media vaovao. Tena nilaina ho an'ny EWAMT i Sara, ary modely ho an'ny vehivavy hafa izay maniry ny hahay mifehy ny media vaovao izy. Mafana fo i Sara ary mahay manangona ny vehivavy manodidina azy izy. Manana fomba fijery mazava izy, ary azoko antoka fa ho vehivavy manan-danja ao Yemen izy indray andro any.
Hita amin'ny tetikasa Rising Voices hafa ny karazana fiantraikany toy izany. Matetika fanatontosana matanjaka ny fianarana ny fomba hanokafana bilaogy sy ny famoahana ny feony manokana amin'ny aterineto, ary mino izy fa maro kokoa ny olona no maniry te hianatra momba ireo fitaovana ireo. Nohazavain'i Sara ny maha-zava-dehibe izany ho an'ny fireneny :
Heveriko fa tena manan-danja tokoa ireo karazana fampiofanana ireo, indrindra ao Yemen satria maro ny olona no tsy mahalala na inona na inona momba ny famahanana bilaogy ary tsy manana fampiofanana maro momba izany izahay. Ilainaa izany mba hiresahana momba ireo hevitra, talenta sy ny kolontsainay amin'ny fomba tsotra. Tsy maintsy mifandray amin'ny revolisionan'ny torohay isika. Ny tambajotra sosialy sy ny famahanana bilaogy no anisan'io revolisiona io.